मंगलबार, १६ मंसिर, २०७७
लेस्टर सिटी रेलिगेसन जोनको फुलहामसँग पराजित
नेकपा सचिवालय बैठक आज, ओली र दाहालको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने
चितवनमा मृत भेटियो गैँडा, चालू आर्थिक वर्षमा १७ गैँडा मरे
किनारा पारिएका माधव नेपाल नेकपामा एकाएक निर्णायक बनेपछि...
अमेरिकाका दुई कम्पनीले मागे कोरोनाविरुद्धको खोप प्रयोगको अनुमति, कुनको मूल्य कति ?
पिकअप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु
वर्षेनि आयात हुन्छ रु.३३ अर्बको चामल, सम्भव छ त माग अनुसारको उत्पादन ?
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रतिवेदन: अत्यावश्यक उपभाेग्य वस्तु मापदण्ड विपरित
स्थानीय तहमार्फत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नहुँदा कोरोना परीक्षण घट्यो, ६ सरकारी प्रयोगशालाबाट शून्य परीक्षण
विज्ञान विषयको अवैज्ञानिक शिक्षण सिकाइ कहिलेसम्म ? जीवन र जगतसँग प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा जोडिने विज्ञान विषयलाई जानी नजानी हाउगुजी बनाउने पहिलो काम शिक्षकहरुबाटै भएको छ। यसो हुनुको पछाडि शिक्षक स्वयंले विद्यार्थी जीवनमा पाएको नीरस सैद्धान्तिक ज्ञान नै हो, जसले विज्ञानलाई रचनात्मक तरिकाले बुझ्नै पाएनन्।
सामाजिक सञ्जाल, जहाँ फरक मतलाई निषेध छ ! अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका उच्चतम् डिजिटल मञ्च बनेका सामाजिक सञ्जाल पछिल्लो समय फरक विचारलाई सिध्याउने अस्त्र बनेका छन्। कतै यसले हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास र आचारव्यवहारमै त प्रहार गरिरहेको छैन ?
मातृकाप्रसादः नायव सुब्बादेखि प्रधानमन्त्रीसम्म २००७ सालको राणाविरोधी आन्दोलनका कमाण्डर मातृकाप्रसाद कोइराला राणाशासनकालमा वन विभागको नायव सुब्बा रहेछन्।
‘हाम्रो टीममा व्यावसायिक व्यक्तिहरू भएकाले चुनाव जित्छौं’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकालसँग आसन्न चुनाव र कोरोनाभाइरस संक्रमण महामारीपछि निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने चुनौतीको विषयमा गरिएको कुराकानी:
बेठेगानको ठेगाना खोज्दा... पखेटा कुँजिइसकेको एउटा चरालाई पिंजडाबाट निकाल्न भन्दा पनि उसलाई उसको हाँच बथानमा पुनर्स्थापित गराउन ठूलो चुनौती हुन्छ।
‘महासंघको छवि सुधार्ने टोली बनेर काम गर्न चाहन्छौँ’ “निजी क्षेत्रप्रतिको सरकारी बुझाइ कमजोर भएकाेले शासन प्रणाली परिवर्तन भए पनि निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने सोचमा परिवर्तन नभएको महसुस भएको छ। सरकारी सोचमा परिवर्तन नभएसम्म हामीले घचघच्याउन पनि छाड्नुहुँदैन।”
बालबालिकालाई सिकाउनुपर्ने जीवनोपयोगी सीप पहिले अभिभावक र शिक्षकलाई ! बालबालिकाले जीवनयापनका लागि नसिकी नहुने पहिलो सीप हो, खाना खानु। तर, बहुसंख्यक आमाहरुकै कारण यो सीप सिक्नुपर्ने उमेरका बालबालिका सिकाइबाट वञ्चित छन्। त्यसकारण हाम्रा बालबालिका परनिर्भरताको पहिलो पाठ आफ्नै अभिभावकबाट सिक्दैछन्।
पत्रु खाना ‘राष्ट्रिय खाजा’ होइन रोग हो चाउचाउ सबैको प्रिय खाजा बनेको छ भन्दैमा त्यो स्वस्थकर होइन भन्ने कुरा सबैलाई हेक्का हुनुपर्छ। चुरोट र रक्सीमा पनि ‘लोकप्रिय ब्राण्ड’ हरू छन्। तर, स्वस्थकर होइनन्। चाउचाउ पनि त्यस्तै हो।
रूपचन्द्र विष्टको प्रेम र झोक सधैं कम्युनिष्ट विचारधारामा बाँचेका विद्रोही र सादगी स्वभावका रुपचन्द्र विष्टसँग घनिष्ट मित्रता थियो, जुन मैले काठमाडौंमा घर बनाएपछि खलबलियो।
‘कमरेडहरू, अब लाज केले छोप्नु हुन्छ ? बरु नेतृत्व छाडेर अभिभावक बन्नुस्’ नेकपाको नेतृत्वमा रहेका नेताहरू जुन अवस्थामा पुग्नुभएको छ, न उहाँहरू मिलेर हिजोको अवस्थामा पुग्न सक्नुहुन्छ, न उहाँहरूबाट अब पार्टी नै चल्न सक्छ। अबको उपाय भनेको संक्रमणकालीन व्यवस्था गरेर उहाँहरूले कार्यकारी अधिकार नयाँ पुस्तालाई सुम्पने र आफू अभिभावकीय भूमिकामा बस्ने हो।
सरकारी कार्यालयका चर्पी किन फोहोर ? सार्वजनिक कार्यालयहरूका शौचालय सफा–सुग्घर राख्न अभियानै शुरू गरौं। फोहोर चर्पी असभ्यताको प्रतीक हो।
सम्झनामा गाउँको तिहारः बिजुली होइन, मैनबत्तीको झिलिमिली वर्षभरीमा लक्ष्मीपूजाको साँझ मात्र गाउँ उज्यालो हुन्थ्यो। कुनैदिन बिजुली आउला भन्ने कल्पना गर्दै लाल्टिनको बेला (सिसा) सफा गर्दा तथा धिप्री र पानसको ध्वाँसो फालेर नयाँ झुम्रो राख्दाका ती दिन शहरमा बलेका झिलिमिली बत्तीले झल्झली सम्झाउँछन्।
राजाको अगाडि प्रधानन्यायाधीशलाई आच्छुआच्छु ! राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता हृषीकेश शाहले अदालतको मानहानि गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाउँदै प्रधानन्यायाधीशले डा. डिल्लीरमण रेग्मी लगायतलाई जेल सजाय गरेपछि यसको तरंग दरबारसम्म पुगेको थियो।
म आमाको लागि छोराजस्तै छोरी मेरी बुढीसासू (सासूको सासू) चन्द्रकुमारी जोशीको उमेरले १०६ टेकिसकेको छ। विस्मृतिले च्याप्दै गए पनि, हामीले कोट्याउँदा मुवाले अड्की अड्की पुराना कुरा गर्नुहुन्छ । यसपालिको अंशमा मुख्यतः मुवाको आमा अनि दिदीबैनीबारे सुनाउनुभएको छ, वहाँकै शब्दमाः
कहिलेसम्म अखाद्य वस्तु सेवन गर्ने ? चाडबाड र अरु समयमा पनि मिसावटयुक्त खाद्य सामग्री सेवन गर्न उपभोक्ताहरु अभिशप्त छन्। किराना पसल मात्र होइन भाटभटेनी र सेन्ट्रल बजार जस्ता व्यापारिक प्रतिष्ठानले समेत उपभोक्ताको स्वास्थ्यको ख्याल गरेको देखिंदैन।
नग्नतामा रूपान्तरित नेपाली राजनीति बालिग नेपालीहरूले दुई वर्षपछि मतदान गरेर सरकारको 'डेलिभरी'को सीधा हिसाब–किताब त गर्नेछन्। तर समस्या चाहिं नेपाली राजनीतिज्ञले गुमाएको चरित्र मर्यादित कसरी बनाउने वा आफ्ना नानीहरूलाई देश चलाउने नेताहरूको चरित्रको औचित्य कसरी पुष्टि गर्ने भन्ने भएको छ।
यसर्थ फुट्दैन नेकपा नेतृत्व पंक्तिमा न्यूनतम कुराहरूमा खुल्ला र पारदर्शी सहमतिको वातावरण विकास गर्ने वित्तिकै नेकपाभित्रको विवाद समाधान हुने मात्र नभई पार्टी एकता सुदृढ हुन्छ र राष्ट्रिय राजनीतिमा कायम अग्रताले निरन्तरता पाउँछ।
कार्यान्वयन भएन भने संविधान कागजको खोस्टो मात्र हुन्छ, तुरून्तै पुनरावलोकन गरौं: कल्याण श्रेष्ठ (भिडिओसहित) हाम्रोमा ‘रूल अफ ल’ कागजमा सधैं छ। संविधान, कानून छ, संयन्त्र छ। प्रहरी, प्रशासन, अदालत, प्रक्रिया सबै छ। तर, ‘रूल अफ ल’ यो संयन्त्रले देखाउने होइन। जनताले संविधान, कानून अनुसार पाउनुपर्ने सुविधाहरू पाए कि पाएनन् भनेर जाँचिने हो। हामीकहाँ यसलाई ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ रूपमा कार्यान्वयन गर्ने योजना नै आएन।
बाबुराम गोपाली (यादव) र डीबी नेपाली
निजगढ विमानस्थलको निर्माणमा छोपिएको पर्यावरण विनाश, के छन् विकल्प ? प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गरिंदा विभिन्न असर र जोखिम देखिएकाले अहिलेको ठाउँको विकल्प खोज्नु हितकर हुन्छ।
‘विमलेन्द्र निधिजी सभापतिको उम्मेद्वार* बन्दा कांग्रेसको हित हुन्छ, गुटबन्दी पनि हट्छ’ “उहाँ सभापतिको उम्मेद्वार* हुँदा एक त मधेशी समुदायका नेताको नेतृत्व कांग्रेसले पाउँने संभावना बढ्छ। अर्को, उहाँ नेतृत्वमा पुग्दा पार्टीभित्रको लामो समयदेखिको गुटबन्दी अन्त्य हुनसक्छ।”
हाम्रो बसाइ शैलीमा ‘होम आइसोलेसन’ कति सहज ? कोरोनाको कहर बढ्दै जाँदा अस्पतालमा बेड नपाइने अवस्था छ। त्यसैले ‘हर घर क्वारेन्टिन’ बाट अब ‘हर घर आइसोलेसन’ हुने जोखिम छ। त्यसका लागि मानसिक र भौतिक रुपमा तयार हुनैपर्नेछ।
कोरोनामाथि काबु पाएको वीरगञ्जका मेयरको निचोड– ‘काठमाडौंमा कडा लकडाउन गर्नैपर्छ’ “काठमाडौं उपत्यकाको महामारी नियन्त्रण गर्न केही समय बन्दाबन्दी गर्नुपर्छ, त्यो पनि कडाइका साथ घरबाट कोही निस्कन नपाउने गरी। त्यसपछि मास टेस्टिङ र एक घर एक पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्छ। बन्दाबन्दी नगरी एक घर एक पीसीआर गर्नुको अर्थ छैन।”
अमेरिकी चुनावबाट सिक्ने कि ‘ट्रम्पको नियति’ पर्खने ? जतिबेला सामाजिक रुपले विभाजनतर्फ उन्मुख अमेरिकामा जो बाइडेन ‘प्रेसिडेन्ट इलेक्ट’ घोषित हुँदै गर्दा उनको पक्ष एकताको आवाज बुलन्द गर्दैथियो, त्यहीबेला नेपालमा सहमतिको सत्प्रयासमा रहनुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहयात्रीहरुको आलोचना र मपाइँत्वको बखान गरिरहेका थिए।
राणाशासनमा ‘हल्लने पुल’ राणाशासनको बेला पनि काठमाडौं खाल्डो बाहिर हल्लने अर्थात् झोलुंगे पुल बन्नुको प्रमुख कारण बिहेबारीको सम्बन्धसँग जोडिएको रहेछ।
चितवनमा मृत भेटियो गैँडा, चालू आर्थिक वर्षमा १७ गैँडा मरे चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सोमबार एउटा गैँडा मृत फेला परेको छ। निकुञ्जको भित्री (कोर) इलाकामा ३५ वर्षको भाले गैँडा मृत फेला परेको हो।
अमेरिकाका दुई कम्पनीले मागे कोरोनाविरुद्धको खोप प्रयोगको अनुमति, कुनको मूल्य कति ? अमेरिकाका दुई वटा कम्पनीले कोरोनाविरुद्धको खोपको व्यापक प्रयोगका लागि अनुमति मागेका छन्। औषधि कम्पनी मोडेर्ना र फाइजरले खोप प्रयोगको अनुमति मागेका हुन्।
पिकअप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकास्थित लुम्देमा सोमबार साँझ पिकअप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ। अरु दुई जना घाइते भएका छन्।
‘ओलीजीले जित्ने, पार्टी र आन्दोलनले हार्ने कुरा हुँदैन’
हामी पार्टीसँग जोडिएका छौं, सिंगो आन्दोलनसँग जोडिएका छौं। पार्टी, आन्दोलन र देशसमेतको यो मामिला कुनै व्यक्तिको लागि मात्र सोचेर हेर्न सकिंदैन।
‘अध्यक्षद्वयले ल्याएका लिखित धारणा प्रतिवेदन होइनन्, नेकपा फुट्दैन’
कुनै पार्टी फुट्नका लागि के हुनुपर्छ ? हामी यति प्रश्नमा मात्र घोत्लियौं भने अहिले नेकपा फुट्ने कुनै कारण छैन। त्यसकारण नेकपा फुट्दैन।
अर्थमन्त्री पौडेल भन्छन्- अर्थतन्त्र उकास्न सरकार अग्रभागमा रहन्छ, निजी क्षेत्रले साथ दिनुपर्छ
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि सरकारले अग्रभागमा रहेर भूमिका खेल्ने बताएका छन्।
१३औं सागमा रू. १ अर्ब ३१ करोड खर्च, एक वर्षपछि सार्वजनिक भयो खर्च विवरण
अघिल्लो वर्ष भएको १३औं दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) मा १ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ खर्च भएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले जनाएको छ। आइतबार राखेपका सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालले पत्रकार सम्मेलन गर्दै १३औं साग आयोजना गर्न १ अर्ब ३१ करोड ७८ लाख ४३ हजार ६१ रूपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिए।
चन्द्र ढकाल भन्छन्- अब चुनावी प्यानल बिर्सिएर काम गर्छु
उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले अब चुनावी प्यानललाई बिर्सिएर सबै उद्योगी व्यवसायीको हितमा काम गर्ने बताएका छन्।